Inona no ilana ny takelaka? | Avy amin'ny Linux
Ny lamaody dia mitondra antsika ary mitondra antsika ary amin'ny teknolojia dia tsy ho latsa-danja izany. Voalohany dia ny netbook, izao ny takela-bato. Ny mpanamboatra tsirairay dia niezaka namokatra maodely farafaharatsiny amin'ireto vilany ireto mba tsy ho tavela any aoriana ary na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy hitako izay ampiasaina na iPad amin'ny iOS, na koa amin'ny Rohy 10 de Google amin'ny Android.
Angamba ity karazana tareco ity dia kendrena amin'ny karazana mpampiasa izay tsy toa ahy. Inona no hampiasa takelaka misy anao? Mijere horonantsary, mihaino mozika, manao valan-dresaka amina video miaraka amin'olona? Hitako fa tsy ilaina ny mitondra fitaovana toy izany amin'ny zavatra tsy mamokatra.
Voalohany, satria tsy mahazo aina izy ireo ampiasaina: tsy maintsy entinao eny an-tananao, amin'ny haavon'ny maso ary amin'ny zoro izay mety hahatratraranao torticollis, satria raha apetrakao amin'ny tongotrao dia tsy mahala azy ireo ny fanaintainan'ny vozona. dokotera sinoa.
Faharoa, satria eto amin'ny taniko, raha jerena ny fepetra misy ankehitriny dia tsy afaka mandeha an-tongotra na aiza na aiza misy ifandraisany a Wifi, ka ny 96% amin'ireo rindranasa misy ireto gadget ireto dia tsy mandeha amiko. Raha hampidina azy io dia mahalana ny mahita azy ireo miaraka amin'ny seranana RJ-45.
Hay izao Netbooks dia mihena eo anoloan'ny takela-bato. Ok a netbook somary mavesatra kokoa izy io, saingy farafaharatsiny afaka manao zavatra betsaka kokoa amin'ny Internet na ivelan'ny Internet aho, ary tsy izany ihany, mazàna izy ireo dia manana toerana fitahirizana betsaka kokoa ary fitaovana matanjaka kokoa.
Na dia miova aza ny fironana amin'ny famolavolana tranonkala, ary miha miovaova ny tranokala, dia mbola misy% marobe amin'izy ireo izay tsy mety ho hita amin'ireo artifact (takelaka) ireo.
Noho izany, ho ahy dia fatiantoka daholo izy ireo. Tsy afaka miasa tsara amin'ny antsipirihany amin'ny programa famolavolana ianao, ary azoko an-tsaina fa manelingelina ny fandaharana miaraka aminny klavijery mikasika izany, avy eo ... Inona no ilana takelaka? Azafady, raha misy afaka milaza amiko, faly aho .. 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fa atao inona ny takelaka?
Elav, curmudgeon taloha xD !!! ...
Nano sy Hugo dia efa nanamarika zavatra maromaro ...
Io dia mitombina toy ny manontany, Gnome sa KDE? Ubuntu na Fedora? Ny valiny dia hiankina amin'izay anontanianao ...
Any Mexico, ohatra, misy toerana maro isan-karazany ahafahanao mampiasa ny fifandraisana Wi-Fi, ary koa ny orinasan-telefaona finday dia manolotra fidirana 3G, noho izany azo atao ny mampifandray saika na aiza na aiza, misy olona "VOKATRA" maro mila. ho 100% amin'ny fotoana mifandraika, tombony lehibe ny miasa lavitra ...
Raha ny fahitako azy dia manana tombony be izy ireo ary vitsy ny mahasoa ...
Manome toky anao aho fa mora kokoa ny mitondra eny an-dalambe amin'ny takelaka noho ny amin'ny solosaina finday ... Afaka mamaky teny mahafinaritra kokoa ianao, mijery horonan-tsaryTUTORIALS, miaraka amin'ny dock novainao ho netbook ary ny fanovana antontan-taratasy mety indrindra dia azo atao , ary izay efa voalaza rehetra ...
Raha fintinina dia ampahan'ny fizotrany voajanahary izay arahana amin'ireo fitaovana ireo, resaka fanavaozana ny toetr'andro, ny fitaovana pilimorphika sy malefaka dia efa antenaina, hitombo haingana ny fahaiza-manao ao anatin'ny 5 taona ho avy = D Na izany aza, antoko teknolojia tsy miato ...
Raha milaza ny steve asa fa tsy maintsy manana izany ianao, ankehitriny dia manadino fotoana be izy ireo na miala voly amin'ny dia lavitra.
Nolazaiko tamin'Andriamatoa Jobs (am-pilaminana tsy misy fitsaharana) fa ho tsara tokoa fa ny fitaovana dia manary fotoana fotsiny indraindray, saingy tsy manamarina ny fanoloana azy ireo amin'ny fako miandry mandritra ny taona maro hivoatra sy hanatsara ny zava-bitany mandra-pahatongantsika izay efa nananantsika. Satria raha misy maniry ny hatsaran'ny tablette dia mividiana zavatra tsara Solosaina findainy azo ovaina, izay fivoarana mirindra kokoa satria tsy ho fitaovana vaovao very fahazoana miasa noho ny hafa manaitra nefa tsy dia mamokatra loatra, fa iray izay manampy ireo fiasa vaovao ireo izay efa nananantsika hatrizay, ka mitahiry fitaovana feno kokoa sy marobe kokoa .
Te-hamaky aho, ny fanaovako izany amin'ny PC na amin'ny netbook dia fanaintainana mahatsiravina sy tsy fahazoana aina. Ataovy ihany koa ny asa fitantanana tranokala (avy amin'ny linux) ary tadiavo ireo tutorial ary ampidino izy ireo, izany no mety amiko, ny manao zavatra avy amin'ny sofa na avy amin'ny farafara, ny zavatra tsy azoko atao xD
Heveriko fa marina ny azy roa, amin'ny resaka takelaka dia tsy afaka milaza ny tsara rehetra ianao na ny ratsy rehetra.
Mpampianatra aho ary ao aminy no hitantanako ny bilaogiko (1 isaky ny kilasy 4), ny mailaka (asa 1, ny Akademia 1 ary ny an'ny 1 manokana) (3 mitovy), averiko jerena ireo bilaogy mahaliana ahy indrindra (12), mamaky ireo bokin'i Kant aho, Nietzsche, Focaul, science, art, design ary marketing, mijery sarimihetsika aho indraindray ary rehefa mavesatra ny andro dia milalao minitra roa aho hamonoana fotoana. Manana galaxi vakizoro 2 aho ka feno ny famaritana. Ary nametraka Ubuntu taloha kelin'izay aho nefa tsy mandeha amin'ny 100 ka manana Android 4.0 aho
Na izany na tsy izany, mamokatra izy io, mazava ho azy fa tsy amin'ny ambaratongan'ny Thinkpad t410 misy ny core i5, 8 gb ao amin'ny Hiperx ram, ary ny ubuntu gnome remix. toerana anaovako sary sy famolavolana sary 3d sy horonan-tsary. Saingy milanja manodidina ny 2 kg ny Thinkpad ahy ary efa mitaky fitsaharana ny lamosiko. Mijery ultrabook aho na dia tsy dia mahita fahasamihafana firy afa-tsy ny lanjany. Ny netbook dia tsy nanana Acer 1410 akory niaraka tamin'ny fihomboan'ny dual-core ary gaga ny zavatra mahantra taorian'ny rendereando minitra roa.
hametraka debian 😛
Manaiky tanteraka, henoko matetika fa iPad no tsara indrindra, saingy tsy azoko ny tsara indrindra amin'ny inona? Izaho manokana dia ho azy ireo, araka ny lazain'izy ireo any amin'ny fireneko, mihantona etsy "fikosoham-bary", tsy afaka miasa aminy ianao, hijerena horonantsary tiako kokoa ny monitor lehibe iray, raha hiresaka aho (ary jereo, raha Tara miresaka aho) aleoko ny klavie feno sy FISSIKA, ary ny programa JA!, Tsy haiko hoe ahoana no anaovanao an'izany sy handrafetana endrika ratsy kokoa!
Manampy ny olona bebe kokoa fotsiny izy ireo, izy ireo no fako amin'ny ho avy, hampiasaina ary hanary satria isan-taona dia mivoaka zillions tsara kokoa noho ny farany izy ireo
ajjaajajaj tsaratsara kokoa xD
manomboka amin'ny Kiobàna iray ka hatramin'ny iray hafa…. hamidy indray XD
Hahahaha .. Tantara marina
Manaiky tanteraka ny lahatsoratra. Ny mikorontana mandritra ny fotoana kelikely dia tsara fa tsy mendrika ny mitondra fitaovana toy izany hanomezana azy ny fampiasana finday avo lenta.
Eny, ny takelaka dia mety "mahasoa" tokoa ho an'ny: milalao vorona tezitra, milalao geek, mijery zava-misy marobe, sns. Satria mirona tsy hamokatra be izy ireo ary mora vidy kokoa noho ny PC, izany angamba no tadiavin'ny tsirairay ankehitriny, hehe.
Raha lazaina amin'ny fomba matotra kokoa, ny takelaka sy ny finday sasany (efa ho lehibe izao) dia nanjary matanjaka be ary manao izay rehetra azo atao amin'ny solosaina PC, ary mora kokoa (rehefa dinihina tokoa, ny tendron'ny rantsantanana dia fitaovana mora kokoa ary voajanahary kokoa ampiasaina raha tsy totozy). Ny reniko dia manana iPad ary faly amin'izany na eo aza ny fananany solosaina finday (izay tsy dia ampiasainy intsony). Saingy, tsy mandahatra programa na manoratra izy, mampiasa ny iPad-ny fotsiny izy hivezivezena, hijerena horonantsary amin'ny YouTube sy ny toy izany, hihaino mozika, hijerena mailaka, hilalaovana lalao, hijerena sarintany ary hanoratra taratasy indraindray na hameno forme iray, ary Ireo takelaka rehetra ireo dia ampy sy be dia be, indrindra raha miaina amin'ny faritra misy ny fandrakofam-Wi-Fi ny mpampiasa. Ary mazava ho azy, ny tombony lehibe amin'ny PC dia ny fivezivezena.
Fa ho an'ny mpampiasa toa anay, ny takelaka dia mety ho mahasoa ihany koa ho toy ny sehatra fampandrosoana. Na amin'ny Android na iOS, misy sehatra tsara ho an'ny fampandrosoana ny rindranasa ho an'ny finday sy ny takelaka, ary amin'ny fomba fijery ara-teknolojia, farafaharatsiny hahaliana ahy tokoa ny afaka manandrana zavatra toa ny OpenGL ES, sns.
Tsotra fotsiny fa rehefa mandeha ny telefaona finday dia nandeha tsara ny finday finday, nanapa-kevitra i Apple fa hahazo zavatra eo anelanelan'ny solosaina finday sy ny finday, ary satria Android dia tsy ho latsa-danja satria namoaka ireo orinasa izay miasa miaraka amin'ny Android, ary ankehitriny samy te hanana iray ny tsirairay.
Ary ho antsika izay manao programa ho an'ny Android sarotra kokoa satria tsy maintsy ataontsika tsara tarehy amin'ny finday ary miaraka amin'ny takelaka ary mahasosotra kokoa izany, ampy ho ahy ny S3 ary manana be dia be aho, misy finday daholo ny takelaka rehetra , azonao atao aza ny mampifandray ny telefaona amin'ny monitor ary mampiasa azy ho CPU http://www.youtube.com/watch?v=9nh2NSLgaII&feature=player_embedded
Tsy voatery ho zavatra ratsy ny fisian'ny takelaka, fa mahatonga anao tsy hisy ilana azy izay entin'ny onjam-panambarana, na "geek lamaody", na zavatra hafa toa izany….
Nomena ahy takelaka misy sinoa misy Android izy ireo, izay vidiny 20 heny noho ny vokatra tany am-boalohany: D, io no zavatra tsara indrindra tokony hovakiako, na boky io, na manga, na ny fakana an-tsoratra ny evernote, tiako manorata koa, ary ny notepad izay entiny dia mihoatra noho ny ampy, avy eo alatsako ao amin'ny PC-ko ary dia izay.
Namaky boky bebe kokoa aho hatramin'ny nahazoako ity takelaka ity (satria ny zava-misy dia tsy manam-bola hividianana ireo boky amin'ny endrika ara-batana aho ary ny tranomboky ny mpampianatra ahy dia @ # !? &), nandefa hira vitsivitsy fotsiny aho ho an'ny rehefa mamaky aho, ary ny horonan-tsary, satria tsy tiako ny mampakatra horonan-tsary amin'ireo fitaovana ireo (telefaona finday, takelaka sns.)
Ny marina dia, raha hampiasa azy io ianao hilalaovanao vorona tezitra (tahaka ny halako io lalao kely lamaody io) dia miarahaba anao, nanao fividianana an-tsaina ianao (feo mahatsikaiky). ary tsara kokoa raha ipad (mankahala ny paoma aho: D) ianao dia iray amin'ireo olona tsara kokoa noho ny fisian'ny takelaka hahahahaha
Soso-kevitra ho an'ireo mpankahala Angry Birds, toy ny helena_ryu [fitsikiana maloto]:
Fotoana vitsy lasa izay dia nanangana ny Blackberry PlayBook ho an'ny mpifanila trano ambony rihana aho ary nahita lalao kely izay manome fampiasa tena mahaliana ho an'ny gyro / accelerometer, nantsoina hoe boaty na zavatra toa izany, ary tafiditra tao anaty boaty vitsivitsy ny toerana marina miankina amin'ny hery misintona.
Ny marina dia, raha nanana ny fahafaha-manao izany aho dia hividy takelaka sinoa koa, misy toerana toa izany http://www.hongkongeek.com izay manolotra azy ireo amin'ny vidiny mirary tokoa.
Ao amin'ny orinasa farany niasako dia manana ipad ny mpivarotra, any no ahitan'izy ireo ny horonantsary momba ny vokatra, ny lisitry ny vidiny, ary mifandray amin'ny tahiry ho an'ny izay atolotra izy ireo, aleon'izy ireo amin'ny laptop na netbook.
Izaho manokana dia aleoko solosaina finday, tsy raharahako izay lanja na refy.
Araka ny efa voalaza tamin'ny fanehoan-kevitra teo aloha, toa ahy ny iray amin'ireo tena fampiasana dia ny famakiana, indrindra raha tsy maintsy mandeha amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa ianao ary isaky ny toerana dia mila miandry ela ianao. Io ihany no nividianako azy.
Mamaky amin'ny efijery misy jiro? Tsia fa misaotra. Faly kokoa aho amin'ny Kindle-ko: kely kokoa, mora vidy kokoa, ranon-dronono, maharitra kokoa ny bateria (herinandro maromaro) ary maivana kokoa.
Ny takelaka dia A: finday goavambe; B: netbook tsy misy klavie. Izany hoe: na ahoana na ahoana, gadget tsy misy ilana azy tsy ampy.
Ary bebe kokoa raha toa ka iPad misy vidiny mihoapampana.
Eny ... ho ahy dia tsy misy na inona na inona toy ny manokatra boky, aleoko iray vaovao ary misambotra io fofona tsy manam-paharoa io, ilay "sonia" ao amin'ilay boky. Ho ahy dia tena tsy mahazo aina ny mamaky amin'ny takelaka, fa avy amin'ny fitaovana hafa ihany koa. Satria voafetra ny fahaizany, tsy afaka manao na inona na inona saika ny olona iray, ary raha mametraka rindrambaiko ohatra ny Blender dia ampidirina miaraka amin'ny fampiasa. Ny fanaovana asa, tsia, satria toy ny miasa miaraka amin'ny smartphone izany, tsy mahazo aina. Mihaino mozika ... fa izany dia misy fitaovana kely kokoa sy azo ampiharina kokoa, hijerena horonantsary. Raha be indrindra ny zavatra azo ampiasaina dia fampirantiana sy fampisehoana an-tsary, hitazomana ny vaovao hatrany, fa ankoatr'izay dia manaiky tanteraka an'i elav aho.
Niala tamin'ny boky aho taona maro lasa izay ary nanomboka nampiasa lelafo ary nampifaly ahy ny ipad, tsy reraka mihitsy ny masoko. Matetika aho no mamaky be amin'ny alina mandry eo am-pandriana.
JuanMa Jurado dia hoy izy:
Nomen'izy ireo ahy ny Nexus 7 ary ampiasaiko handrindra izany. Ho an'ny mpikirakira Android dia manoro hevitra ny hampiasa takelaka ianao. Raha tsy noho ny asako dia azo ampiasaina hilalao ao an-trano mamaky lahatsoratra amin'ny Internet ny takelaka (manana boky e-hamaky boky aho) na hitondrako any an-tranon'olona hampianatra zavatra azy ireo. Amin'ny maha mpahay siansa informatika ahy dia aleoko foana ny laptop, saingy marina fa ho an'ny asa sasany dia mora kokoa sy haingana kokoa ny mampiasa takelaka.
Ny takelaka dia zavatra tsy ilainao raha tsy manandrana iray ianao (na dia mbola tsy ilaina aza izany).
Valiny tamin'i JuanMa Jurado
Mahaliana. Tsy mbola naheno olona nanao programa tamin'ny takelaka iray aho. Ankoatra ny fanaovana izay ahazoana aina azy dia ataonao amin'ny fomba XD.
Miala tsiny, nanazava ny tenako diso aho XD Te hilaza aho fa ampiasaiko hizaha toetra ireo programa. Tsy te-hanondro ny lesoka an'ny emulator Android amin'ny Linux aho. Raha mampiasa programa dia mampiasa solosaina finday miaraka amin'ny Fedora 17. Tsy azo atao ny manao programa amin'ny takelaka.
Ny takelaka dia amiko toa telefaona tsy misy antso sy pc misy satroka.
Ho ahy zavatra ilaina dia ny telefaona misy fampiasa amin'ny takelaka, zavatra toy ny naoty galaxy, rehefa lehibe aho dia hividy azy XD.
Mba hisehosehoana sy hanariana vola.
Ny olana dia tsy ny takelaka, fa ny fampiasana omen'izy ireo an'io
manaiky tanteraka, mianatra any amin'ny oniversite aho, miasa, ary izaho koa raim-pianakaviana, ary minoa ahy fa tena mahazo tombony betsaka amin'ny takelaka misy ahy aho. Ao amin'ny U, manampy ahy hitazona ny vanim-potoana amin'ny mailako, mandray an-tsoratra ary mandray ny antontan-taratasiko, na asa na fianarana ireo, na dia bebe kokoa aza dia manompo ahy mandritra ny dia mankany amin'ny Oniversite, satria mihoatra na latsaky ny Mandeha 1 ora sy sasany, ary efa ampy ny nanampianao ahy handroso ireo boky fampianarana sy fitaovana hanaovana fitsapana. Amin'ny ankapobeny dia mitovy amin'ny any am-piasana izany, fa mifantoka amin'ny famonoana fotoana amin'ny fotoananao tsy misy atao, amin'ny teôria ... xD, hijerena, hampiasa ny mailako ary hiarahana amin'ny oloko. Ary farany, amin'ny maha-raiko ahy dia afaka mitondra ny mozika sy horonan-tsary tiako ny zanako vavy aho, miampy ny fandehany any amin'ny YouTube, ohatra, ary mijanona tsy manadala amin'ny dia haha. Izany rehetra izany, mazava ho azy, amin'ny takelaka misy ahy izay misy 3g sy ny drafitra isam-bolana mifanaraka amin'izany amin'ny ISP-ko. Miarahaba namana.
paltonov dia hoy izy:
Fantatro amin'ny mpanoratra ny lahatsoratra, faly aho mahafantatra fa tsy izaho irery no tsy hitako izay ho ahy.
Ianareo izay mampiasa azy io mba hamakiana dia manoro hevitra anao aho tsy hanao izany, amin'ny efijery misy lamosina dia mandoro ny masonao izany.
Ho an'ity Kindle ity miaraka amin'ny efijery ranomainty elektronika ary tsy misy jiro aoriana.
Mamaly an'i paltonov
Steve Harris dia hoy izy:
Hatramin'ny nividianako ny takelaka nataoko dia nanomboka nanao ny ankamaroan'ny hetsika nataoko teo aminy aho, nanomboka tamin'ny fananako hetsika tamin'ny tambajotran-tseraserako ka hatramin'ny hetsika mamokatra (fikarohana, famolavolana ary famakafakana ny rafitra). Izaho dia mpandrindra ny rafitra ary nanompo ahy tamin'ny sehatry ny famakafakana sy ny famolavolana. Miaraka amin'ireo rindranasa toy ny dropbox na google drive dia ananako eo an-tànako ny fisie rehetra toa ny PDF's, automation an'ny birao, sary, boky, boky torolàlana, sns. Manontany azy ireo aho amin'ny fotoana rehetra, misy ny fampiharana tsy misy farany. Misy fampiharana izay manampy amin'ny fanentanana ny zanako, zavatra tsy mampino izany. Angamba mbola tsy vitako ny manolo ny solosaina finday 100%, satria sarotra kokoa ny manamboatra fandaharana sy ny fampandrosoana, saingy afaka manao ny hetsika ataoko manokana 100% amin'ny takelaka aho, ireo hetsika ataoko matihanina ataoko 50% amin'ny takelaka. Ny zavatra niainako
Valiny tamin'i Steve Harris
Mbola omeko azy manokana amin'ny fitaterana, ny solosaina findainy avoakako ihany rehefa tonga any amin'ny birao
Tsy handany ny vola mitovy amin'izany amin'ny vidiny aho mba handaniako ny fotoana fotsiny rehefa mandainga aho ... ary araka ny voalaza etsy ambony, misy zavatra tsara kokoa hovakiana, noho ny antony misy ny ranomainty elektronika.
Ny fifandraisana misy eo amin'ny vidiny sy ny fampiasana azy dia tsy mety amiko, tsy lazaina intsony fa tsy tiako ny rafi-piasany (iOS, Windows ary Android).
Na dia miombon-kevitra amin'i Elav aza aho amin'ny ankapobeny, mieritreritra ihany koa aho fa nilaza hevitra tsara i Nano. Mino aho fa ny Takelaka dia fanitarana ny PC na Laptop (amin'izao fotoana izao) ary manamora na manamora ny fakan-kevitra, fikarohana, fampitana ary famindrana vaovao.
Raha izaho manokana dia tsy ilaina amiko ny Tablet ary raha mbola tsy manana herin'ny solosaina finday na Netbook akory izy ireo dia zavatra iray hafa ihany ny marina.
Hitako ho fanavaozana ny gazety izany. Tsy tiako ny mamaky amin'ny PC-ko, hitako fa mavesatra be izany raha oharina amin'ny boky na magazine.
Etsy ankilany, ireo zavatra ireo dia tsy mavesatra, amin'ny fampiasana hafa tsy hitako izy ireo, na mihazakazaka ny lalao psp. Amin'ny fampiasana blender, pffff dia manapotika ilay fitaovana miaraka amina may eo am-pelatananao ianao.
Vakio ny rss sy ny resaka hafa, satria na ny horonantsary aza tsy mandeha tsara haha ​​(laptop-n'ny namako).
Amin'ny zavatra hitako dia azonao atao ny mametraka linux toy ny debian na rafitra hafa.
Ny singa manan-danja indrindra dia lafo loatra amin'ny zavatra azon'izy ireo atao. Aleo aho mividy solosaina finday misy loharano tsara kokoa (raha resaka portability no resahina).
Ny antony tsara dia satria andriamby ho an'ny vehivavy izy ireo;).
Nah, ny marina, ampiasaiko betsaka io, indrindra any amin'ny oniversite ary atsipiko koa ny andian-dahatsoratra, boky, tanany, rss, Mail ary mitondra kitapom-batsy foana aho ka tsy mavesatra ahy xP
Ho ahy manokana, ny fampiasana omeko ny takelaka dia ny miserasera amin'ny Internet rehefa eo am-pandriana aho, na mamaky ebook, mahazo aina XD
Raha ny hevitro, ny takelaka dia mazava ho an'ireo olona mandany votoaty fa tsy mamokatra azy. Tsy tsiambaratelo ho an'iza na iza fa ny fandaharana amin'ny takelaka dia ho lahasa tsy mamokatra 100%. Etsy ankilany, takelaka toa mety amiko izany mba hahafahan'ny olona tsy mahalala na inona na inona momba ny solosaina hanakaiky an'ity tontolo ity. Ho antsika rehetra dia tena ara-dalàna ny mamindra ny totozy sy ny mihetsika ny zana-tsipìka kely, fa ho an'ny olona tsy manana fanazaran-tena amin'ny solosaina dia tsy miharihary izany. Ohatra iray hafa ny fomba fivezivezantsika amin'ny antontan-taratasy na pejin-tranonkala, lazainay fa ampidininay amin'ny alàlan'ny totozy ny pejy nefa rehefa te hampiseho zavatra amin'ny raiko amin'ny Internet aho dia nasainy nanangana pejy aho hamaky bebe kokoa, ary na dia toa hafahafa amiko izany, izay lazainy fa marina dia miakatra ihany ny pejy hany ka lasa zatra miteny isika fa midina izany amin'ny alàlan'ny fihetsiky ny totozy ary amin'ny takelaka raha te hamaky misimisy kokoa dia miakatra ny pejy rehefa raha toa ka nanao kofehy ara-batana izy. Na izany na tsy izany, heveriko fa ny fahamendrehana takelaka dia ny hampanakaiky ny olona amin'ireo loharanom-pahalalana misy ankehitriny ary hampahatsiahy antsika fa tokony ampifanarahana amintsika ny fitaovana fa tsy isika ho azy ireo.
"Ny takelaka dia miharihary ho an'ny olona mandany atiny fa tsy mamokatra azy"
WTF ianao dia nahatonga fanodikodinana tanteraka tamin'ny fomba namakiako ny solosaina. Very hevitra aho rehefa avy namaky an'io. Fantatro fa hidina aho, nefa miaraka amin'izay dia tsapako fa hiakatra ilay pejy. Mampatahotra.
Fa kosa, mahita ny saga Angry Birds iray manontolo izy ireo.
Raha dinihina tokoa, heveriko fa ilay nantsoina hoe takelaka dia somary nanana fironana nitovy tamin'ny an'ny Microsoft sourface (na izay antsoina hoe izy), dia mandeha amin'ilay zavatra hitantsika tao amin'ny takelaka Android na tao amin'ny ipad, raha jerena fa nampiditra seranan-tsambo USB izy, ny fahafahanao mifandray mivantana amin'ny monitor ivelany tsy misy horonan-tsarimihetsika (toy ny takelaka sinoa maro) ary miaraka amina CPU tsara afaka mihazakazaka programa birao, miaraka amin'ny fahombiazan'ny ipad, Nanova an'io fahitana io teo imason'ny mpampiasa maro i Apple tamin'ny naha lasa 'standard' na ivotoerana fanovozan-kevitra, namorona vokatra iray izay tsy afaka miasa afa-tsy ny fampifanarahana ireo rakitra multimedia amin'ny solosaina, hijerena, hamaky ny vaovao momba ireo bilaoginao ankafizinao sy afaka mibitsika foana ... eny, izay hitantsika anio; Smartphone lehibe namboarina mba tsy hisian'ny antso.
Miala tsiny amin'ny tsy fisian'ny ttildes sy ny n ~ EN ~ E, anglisy ny fitendry.
Miarahaba .. ho an'ny fitendry anglisy mampiasa ny teny anglisy International variant miaraka amin'ny fanalahidy maty .. ary apetrako miaraka amin'ny Alt + N 🙂 ny ñ
Fish dia hoy izy:
Ny mamaky tantara an-tsary dia tonga lafatra!
Valiny amin'ny trondro
Edrako dia hoy izy:
na amin'ny endrika pdf, cbr sy cbz, na webcomics
Mampiasa azy io koa aho mba hanaovana sketsa amin'ny Sketch book pro ary ampitaiko amin'ny pc aho ary lokoko amin'ny gimp
ankoatry ny fitetezana ny internet sy ny zavatra efa napetraka eto, fa rehefa mamolavola azy ireo dia miankina amin'ny filan'ny mpampiasa izany
tsy mila mividy an-keriny koa ianao
Valiny tamin'i Edrako
Manana solosaina birao sy solosaina finday aho. Iray isaky ny 3-4 volana fotsiny aho no mampirehitra ny solosaina finday.
O_O Tamin'izay no nivoaka ny zavatra lazain'izy ireo: manome volombava Andriamanitra ho an'ireo izay tsy manana valanoranony .. Adala aho eto satria manana solosaina finday ary manana iray izay ampiasainao isaky ny 3 na 4 volana xDDD
Eto Espana, farafaharatsiny Ipad io, tsy andriamby ho an'ny vehivavy izany, ahoana raha, ny takelaka dia fitaovana tsotra ho an'ny mpanjifa atiny audiovisual ..., ho an'ny ambiny, aleoko ultrabooks.
Tany Goatemalà, nisy takelaka android noforonina izay misy fidirana usb marobe ary ny 2 dia ho an'ny totozy sy fitendry izay niaraka tamin'ilay takelaka, izany hoe, netbook iray izay raha tianao dia azonao ampiasaina ho takelaka na ho netbook ary rehefa mandeha mivantana ao anaty kitapo Rehefa nosokafanao ilay kitapo dia efa anananao ilay netbook ary raha tsy te hampiasa totozy na fitendry ianao dia ny mampifandray azy ireo fotsiny, amin'ny alalàn'ny fisehon'ilay kitendry ny pad hitondrany ny arrow ankoatry ny afaka mampifanaraka totozy mahazatra na laptop. Eny eny indray andro, farafaharatsiny, avo roa heny ny fahaizan'izy ireo amin'ny sehatry ny fitaovana, mividy iray aho, fa tsy amin'izao fotoana izao.
Ho an'ny ambiny, manaiky tanteraka an'i Elav sy ireo mpiara-miasa amiko aho, zavatra tototry ny entana fotsiny izany.
2 taona lasa izay, noforonina teto ny takelaka / netbook voalohany
eto misy loharano vao haingana kokoa:
Iray amin'ireo nividy Netbook tamin'ny voalohany aho. Ary tsy ela aho dia diso fanantenana. Tiako foana ny fitaovana iray anaovana asa lehibe toy ny famakiana paositra, famakiana PDF, fanamarinana ny kalandrie, fandraisana an-tsoratra, fakan-kevitra momba ny tahiry, fijerena zavatra amin'ny internet, sns… tsy mila mamono ny PC ary mipetrapetraka amin'ny seza mirindra. Izany hoe, tsy misy zavatra mila herin'ny ekipa lehibe sy fifantohana amiko (toy ny fanitsiana horonantsary na sary). Nihevitra aho fa avelan'ny Netbook hamela azy io, saingy amin'ny zavatra sasany dia tsy mahazo aina izany. Ny takelaka dia manolo ny lesoka ao amin'ny Netbooks, farafaharatsiny ho an'ny fampiasana izay heveriko fa. Fa manana fisalasalana aho; amin'ny ankapobeny dia ny tsara no manery anao hiasa amin'ny rahona, zavatra izay tsy mampihomehy ahy loatra izay matetika mitaky filàna fifandraisana tsara, izany hoe, vola bebe kokoa.
Saingy, hitako fa tena ilain'izy ireo ampiasaina amin'ny solosaina misy fidirana eo noho eo, misy foana ary mazava ho azy miaraka amin'ny ho avy mahafinaritra.
Mahita ny hoaviko toy izao aho (mieritreritra ny fampiasako, ny ekolojia ary ny fanjifana farafahakeliny): solosaina finday ho solosainao manokana (misy an'izay misy ankehitriny dia efa manana fahefana ampy hanao ny zava-drehetra), takelaka isan'andro isan'andro ary hitantanana ny dizitalinao fiainana (na dia mety misy vidiny aza ny telefaona finday) sy miniPC, mifamatotra amin'ny fahitalavitra, alaina sy télé. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny "tilikambo" dia manao sorona ny tenany ho an'ny fivezivezena sy ny tahiry / acology.
Tiako ny mahita takelaka ho zavatra ilaina sy mahery kokoa noho ny eReader, miaraka amin'ireo fiasa mitovy amin'ny netBook (na dia ambony kokoa aza ny an'ny efijery, na ny habeny na ny refy) ary miaraka amina interface tsara izay mitovy amin'ity indray mitoraka ity . Ernesto, Cuba dia tsy mari-pamantarana eo amin'ny tsena manerantany. Amin'ny eran'izao tontolo izao dia misy WiFi maimaim-poana sy ny "karazam-bahoaka" izay mampiasa an'ireny gadget ireny.
Tsy mafana izy ireo, maharitra maharitra ora maro ny bateria, ary mahafinaritra ny traikefan'ny mpampiasa.
Na izany na tsy izany dia tsy tampony ny lisitr'ireo laharam-pahamehako / manambony tena, fa tafiditra ao anatin'io izy dia zava-misy izany.
Mazava ho azy fa ny Willianina saingy mieritreritra ny fomba fiainako aho (indrisy) ary afaka nampiasa takelaka (ho an'ny fialamboly, sns) rehefa efa manana PC aho, Laptop .. fa tsy misy an'izy roa voalaza teo aloha .. Inona no hataoko maniry izany ho? Tsy hilazana fa amin'ny ankapobeny, ny fahaizany mitahiry dia ambany noho ny netbook ohatra.
BTW. Raha te hiteny ratsy an'i Jobs ny hevitra dia tsara ho an'ny sarin'ny iPad eo amin'ny fonony. Raha tsy izany dia heveriko fa ny sarin'ny takelaka Android dia tokony ho teo amin'ny haavon'ny bilaogy io.
Ny hevitra dia ny miresaka momba ny Tablet, ary azoko antoka fa na iza na iza manontany anao momba ny iray, ny zavatra eritreretin'izy ireo voalohany dia ny iPad. 😉
Miankina amin'ny fampiasana izay homena izany, ohatra, misy olom-pantatro amin'ny zanaka autiste izay mandeha amina sekoly manokana miaraka amin'ny iray amin'ireo zanako (autistic koa izy), ny zava-misy dia nividy ilay olom-pantatra iPad ary nametaka azy Ny rindranasa sasany novolavolaina teto Japon ary azoko antoka fa efa nandroso haingana ny zazalahy iray olom-pantatrao amin'ny resaka fianarana sy fampifanarahana mba hoentina any amina sekoly mahazatra, ka ny " junk "izay nahasoa.
Araka ny efa nolazaiko teo dia miankina amin'ny fampiasana izay homena izany.
Misaotra antsika rehetra tamin'ny fanehoan-kevitra.
Manomboka amin'ny hevitra hoe tsy tiako ny mamaky boky amin'ny efijery, ny votoatiny fohy fotsiny toy ny lahatsoratra, HowTo, tutorials ... Tsy manana Wi-Fi isaky ny zoro aho, ary mainka koa ny Internet, amin'izay aho afaka aza manamarina na dia ny mailaka aza, na tsy misy mitovy.
Milalao? Mety ho izany, saingy tsy manokana antsasak'adiny mihoatra ny lalao aho, raha tsy rehefa mitifitra an'i Arenoso ao amin'ny OpenArena xDD aho.
Ho an'ny orinasam-pandraharahana misimisy kokoa toy ny fampisehoana, hanehoana vokatra dia hitako fa mahasoa kokoa izy io, fa tsy ny anjarako na ny tontoloko io. Tsy mahita fomba mahafinaritra hijerena video eo am-pandriana aho, toy izany koa: nariana.
Fa mandeha lavitra kokoa isika, ny vidiny .. Raha afaka mividy iPad amin'ny vidiny aho, antenaiko fa hahandro ahy io, hanisy vy ny akanjoko ary hanasa azy ireo mihitsy aza .. azafady.
Noho ireo antony ireo no tsy hitako fa ilaina amin'ny zavatra mitovy amiko .. 😀
Manana Acer Iconia A500 aho ary ampiasaiko ho an'ny tena voalazan'i nano. Ampiasaiko ny solosaina PC amin'ny zavatra tsy vitako amin'ny takelaka, ilay kahie hampiasako ho an'ny zavatra eny amin'ny oniversite (to-go) fotsiny.
Ho an'ny fialamboly sy ny fihinanana atiny milamina amin'ny toerana rehetra ary manana fahaleovan-tena bebe kokoa noho ny kahie, ny takelaka Farafaharatsiny toa mahasoa ahy io 🙂
Te tablette foana no tadiaviko, fa raha tsy afaka mametraka linux ao aminy aho, mandra-pivoak'i vivaldi sy ny toy izany, tsy misy mifanaraka amin'ny paosiko
Tsy ampiasaina amin'ny NADAAAA izy ireo mba hahazoana vola fotsiny amin'ireo "cholulos" izay mirehareha amin'ny vaovao ara-teknolojia. Mitahiry kahie iray aho.
Andriamatoa Geronimo, ny fanehoan-kevitra maranitra toa ny anao sy ny toa azy dia tena mampanan-karena an'ity, ny bilaoginay (ny tsy fisian'izy ireo lehibe, tsy mino).
Ny fahasamihafan'ny fampiasana izay ampiasain'ny teknolojia ankehitriny dia midika fa ny safidy isan-karazany ananantsika dia miankina amin'ny mpampiasa farany mandany azy ireo.
Amin'ny tranga manokana, manana birao birao sy tablety aho.
Ny vadiko dia mpampiasa manontolo amin'ny takelaka, satria ny fampiasany dia ny fahazoana vaovao sy fialamboly, mihaino radio izy, ny fanangonana mozika azy, mamaky mailaka, mijery ny zavatra ao aminy amin'ny Internet, ary rehefa mijanona ireo ankizy mamaky fotoana fohy, mamaky boky na mijery sarimihetsika. Izany rehetra izany dia misy fahalalahana mivezivezy be dia be, tsy mitondra lanja, dia mampifanaraka ny fahitana resipeo mandritra ny fandrahoan-tsakafo, eo am-pihainoana mozika, ary amin'ny fijerena horonantsary eo am-pamolahana, tsy mila atao amin'ny toerana misy ny fahitalavitra. Ny tiako holazaina dia hoe ny tombony rehetra heverin'ny pc na ny notebok mihoatra ny takelaka, satria fatiantoka izany.
Ny zanako dia mizara ny fotoanany, antsasaky ny antsasany, milalao zavatra sasany amin'ny PC izy ireo ary ny hafa kosa amin'ny takelaka, sarimihetsika ary Internet, saika eo amin'ny takelaka foana, manoratra ny tenany rehefa mianatra, amin'ny takelaka, manao asa birao na sary, ao amin'ny ny pc.
Raha ny amiko dia mampiasa ny pc 95% amin'ny fotoana aho, tsy mila mivezivezy na inona na inona aho, ary tsy liana amin'ny zavatra ataoko, mila ny herin'ny pc, ny efijery misy azy aho.
Eny, araka ny hitanao, mieritreritra aho fa manana antony tsara izy ireo na dia tsy ampiasaiko mihitsy aza izany.
Fa inona ny takelaka:
AO ANATIN'NY TRANO:
Raha eo amin'ny toerana rehetra tsy eo anoloan'ny masinina aho, ohatra, amin'ny patio, eo an-jaridaina, ao amin'ny trano famakiam-boky (fantatra koa amin'ny hoe fandroana) na eo am-pandriana, ilay takelaka dia NY ZAVATRA MISY MAHATSARA indrindra ho an'ny, ankoatry ny zavatra hafa, mikorisa amin'ny Internet, mijery horonantsary ary ampiasao izany ho toy ny fanaraha-maso lavitra hampiasana ny solosaina findainy nefa tsy mila mifoha.
Fa atao inona ny takelaka? HO AN'NY REHETRA! Izy io dia ampiasaina amin'ny asa madinidinika rehetra izay tsy manamarina ny fananana monstrosity toy ny solosaina finday, ankehitriny dia efa prehistorika manakaiky ireo ultralight izay mety hanatanteraka tsara ny anjara asa nolazaiko izay ampiasako ilay takelaka na dia tsy azoko nolazaina aza izany raha tsy efa iray teo an-tànany.
Etsy ankilany, ny endrika sary dia ahazoana aina kokoa amin'ny fitetezana ny tranonkala noho ny endrika fisehosehoana.
Ny marina dia ity takelaka ity dia iray amin'ireo zavatra noforonina farany tsara indrindra, solosaina bitika, mora entina ary mahery 😀 io
Mivoaka any an-trano:
Miankina amin'ny fibodoan'ny tsirairay, ny tabilao dia manana Fampiasana marobe:
Raha mpanao gazety ianao na mandray an-tsoratra tsy tapaka, dia tsy ilaina intsony ny mitondra ny solosainao finday na aiza na aiza, amin'ny takelaka misy anao be dia be.
Ao anatin'ny orinasa iray, raha laninao eo anelanelan'ny fivoriana na fifanakalozam-baovao amin'ny vondrona samihafa izany dia tsy hivezivezy miaraka amin'ny solosainao findainao ianao. handeha handray ilay takelaka ianao dia handeha.
Tany amin'ny toerana niasany mandra-pahatongan'ny iray tamin'ireo tompona no nitondra ny takelaka misy azy hatraiza hatraiza ary nampiasa izany mba hanomezana fampisehoana mivantana ny vokatray sy ho mpikarakara. Na dia MBP 13,3 ″ aza ny masininy, satria manana ilay takelaka izy dia sarotra ny mamoaka ilay masinina any ivelan'ny birao rehefa mila miasa any ivelan'ny fihaonany amin'ireo mpanjifany izy.
Miankina amin'ny fampiasana hanome zavatra anao izany rehetra izany, mbola fitaovana izy ireo. Talohan'ny nahazoako 3G tamin'ny findaiko sy tamin'ity fomba ity dia afaka niditra lavitra tamin'ny solosaina aho, na aiza na aiza, rehefa nangataka fanampiana tamiko izy ireo (ssh indrindra).
Ary mitandrema, eto amin'ny taniko sy amin'ny tanànako dia mahazatra ny mahita Wi-Fi misokatra ho an'ny fampiasana olona, ​​mampalahelo fa ny tsy fandriam-pahalemana iainanay, izay mahazatra ny repoblika akondro, dia mahatonga anao tsy ho afaka mampiasa fitaovana toy izany eo afovoan'ny arabe, raha toa ka mikapoka olona lehibe amin'ny tanany roa azo esorina na vonoina ho an'ny kiraro roa ...
Repoblika akondro, eny tompoko.
Matetika aho mampiasa tablety sy smartphone iray isan'andro, satria saika nandao ny computing aho, nandany ny ankamaroan'ny andro tao ambadiky ny monitor (ny tanjoko farany dia ny gentoo) ary nanokan-tena ho zavatra hafa aho, lalàna. Ilaina tokoa ireo fitaovana roa ireo, afaka mamaky pejy an-jatony isan'andro aho nefa tsy manelingelina ny masoko sy tsy misy olana amin'ny bateria, mitady plug ary marary ny soroko tsy hisintona kahie (na boky an-jatony voasoratra). Etsy ambony dia malina, ny haben'ny notepad, miaraka amin'ny fonony dia toa fandaharam-potoana izany, tsy tiako mihitsy ny hevitra cholulear amin'ny kahie na ny ratsy kokoa, maka sary iPad 😛 mba hisehosehoana fotsiny. Tena tiako ny fahafaha-manao sy fahalalahana hanandrana amin'ny android, na dia tiako aza ny sehatry ny fitaovana misokatra ahafahana misafidy ny OS. PC dia hitohy hisy mandritra ny taona maro satria tsy misy mampitaha ny fampiononana amin'ny fitendry keyboard sy ny multitasking power, diso tanteraka ilay hevitra hoe "Post PC era", na hanjakazakan'ny Apple ny tontolon'ny solosaina, kely kokoa amin'ny fireneko. amin'izany marika izany dia saika tsy azo atao mihitsy (toy ny mpamaky e-ihany koa). Ny azo ekena dia mety ny fahafahan'ny besinimaro tsy manam-pahalalana mifindra any amin'ireny sehatra ireny, satria tsy misy dikany ny mividy PC hanoratana bitsika na Facebook, dia mandany hery sy hery ny fampiasana PC amin'ny zavatra tsotra toy izany .
Ataoko fa mba tsy hitondra lanja be sy hahafahana manao zavatra fototra VERY
Tena manontany tena aho raha toa ka mendrika ny hividy iray izany, fa ny tena mahaliana ahy dia ny ahafahako mamonjy ireo PDF an'arivony maro izay tsy haiko raha tafiditra amina mpamaky E izy ireo fa tsy dia be loatra. any Arzantina
Fototra "VERY"!? Inona no tadiavinao, manangona kernel (inona no azo atao)?
Lazao amiko zavatra "sarotra" izay tsy azonao atao amin'ny rindrambaiko mety ...
Tsy ny takelaka mivantana an'ny iOS sy Android ihany, misy ihany koa Debian, Arch, openSUSE ary Ubuntu ankehitriny.
Tena fototra, mijery anao ...
Amin'ny takelaka dia afaka manao zavatra maro ianao fa tsy xD tena fotony
Rindrambaiko tsara ho an'ny PDF dia iAnnotate PDF https://www.branchfire.com/iannotate/ somary lafo nefa misy ny Jailbreak 🙂
Ary mbola manana ny taratasiko sy ny pensiliko ... XD
Heveriko fa tsy mifanaraka amiko ny politikan'ny mpanjifa.
"Heveriko fa tsy mifanaraka amiko ny politikan'ny mpanjifa." : facepalm:
Eny, hahazo ipina retina aho izay hanimba ny fy, ary tsy mendrika izany, hahahaha
Mitandrema amin'izany, ry zana-tsipìka!
Ny lehibeko teo aloha, mpampiasa an'i Amiga nandritra ny androm-piainany ary taty aoriana Apple, dia nitaraina ny amin'ny nikatonany, "voahidy" iPad iray raha ampitahaina amin'ny Android, Plasma Active ary ireo sisa azo soloina (maimaim-poana).
Ny zavatra nitarainany tamin'ny iPad 2 -ny dia ny tsy ahafahanao manodinkodina ny vaovao ao anaty fitaovana araka ny itiavanao azy, mila manao izany hatrany ianao amin'ny alàlan'ny fomba tolo-kevitr'i Apple ary mitarika anao hahatsapa fa tsy anao izany. . ny fampahalalana voarakitra ao.
Ao amin'ny sehatra teknika, tsy mampino ireo bibikely ireo: tena, mahafatifaty ety ivelany, voaorina tsara (tsy toy ny ankamaroan'ny takelaka avy amin'ny orinasa hafa), misy efijery misy loko tsy mampino, sns Raha ny momba ilay rindrambaiko, dia izay no nampiasan'i Apple antsika taloha: fampiharana azo ampiharina sy mampahazo aina hampiasaina - na dia voafetra ihany aza ny asany-, tsara tarehy sooo kanto, miaraka amin'ny rafitra fiasa izay mandeha tsara ... tena mahafinaritra izany hampiasa iPad.
Na izany aza, misy ny lohahevitra kely nolazaiko anao: tsy ela taorian'ny nampiasana azy, raha tsy ampifandraisinao amin'ny masinina Apple izany dia hahatsapa ho voahidy ianao satria voafetra tokoa ny fahafaha-mizara vaovao amin'ny fitaovana hafa ankoatran'ny Apple - amin'ny famolavolana.
Ho fanampin'izany, ny iPads, tsy toy ny ankamaroan'ny takelaka hafa, dia tsy mamela anao hanitatra ny fitadidiana anatiny, miaraka amin'ireo ambiny solosaina ireo dia tsy misy olana toa izany satria azonao atao ny mampiasa ny karatra fitadidiana tadiavinao - ho fanampin'ny fametrahana distro, hongotantsika ny Android farany sns.
Misaotra mpiara-miasa amin'ny torohevitrao, efa manana MacBook Pro sy iPhone aho ka liana kokoa amin'ny ipad noho ny takelaka android iray hafa, raha manana telefaona Android aho dia hitodika any amin'ny takelaka android, arahabaona
Eny, mba afangaro eo amin'ny Tablet sy Netbook dia tadiavinao ilay Asus Transformer. Ny dock-keyboard-nao dia heveriko fa misy seranan-tsambo RJ-45, USB ary zavatra hafa… Ka tsy ratsy izany.
Ny smartphone dia nahatonga ny takelaka ho lany andro, fifandraisana tsara kokoa, fitadiavana tsara kokoa, fahafaha-manao tsy manam-petra mihazakazaka, oh, ary afaka miantso amin'ny telefaona ianao. Ny takelaka dia tena mangatsiatsiaka, manify ary kanto ary koa mampahazo aina ampiasaina (ao an-trano) fa raha tsy izany dia tsy misy ilana azy, na dia ilaina amin'ny famakiana aza izy ireo dia aleoko kokoa ny boky misy ranomainty.
voarara dia hoy izy:
INDRINDRA NY TABLETA
Heveriko fa toy ny fananana boky, indrindra ny rakotra sarotra, tsy misy mitovy. Saingy raha tsy misy ny enti-manana (ary amin'izany dia tsy te hampirisika ny piraty aho) dia tsy ho zakako ny boky rehetra novakiako, misy ihany koa ny tombony (farafaharatsiny amiko) ny fananana rakibolana telo (Larousse, Espasa Calpe ary The RAE) izay tsy idirako raha tsy amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ny teny hoe aiza no misy ny famaritana, ny synonyme, ny antonony, ny ohatra sns aseho eo no ho eo ary mampiasa bokotra hafa dia averiko ny famakiako. Ny toerana famakiana dia tsy mahazo aina satria mitovy amin'ny boky izy io ary afaka mitondra maromaro izay vakiako miaraka. Ary farany, ny findaiko ihany koa, calculator siantifika karazana IT, fahitalavitra, sns. ka amiko dia ilaina be io !!
Mamaly an'i banndiido
franplan dia hoy izy:
Izaho, amin'ny maha mpanoratra ahy, mbola tsy fantatra! lol, mpianatra lalàna, mpiasa -tsy mpampianatra- eny amin'ny anjerimanontolo ary liana tsy te hibebaka aho dia miaiky fa:
-Nividy tablette fotsiny aho.
-Tsy ampiasaina hamokarana io fa handany.
-Izy io koa dia miara-miasa aminao amin'ny fotoanao, manaisotra anao (esory ny volo fotsy na tsy antitra loatra)
-izany no zavatra tsy misy ilana azy sy ilaina indrindra azo eritreretina.
-Mahatalanjona sy majika.
Mamaly an'i franplan
Manana iray aho fa miadana be
mapache dia hoy izy:
Ireo namana takelaka dia manana fampiasana mihoatra ny fisalasalana, izany dia; Raha vantany vao azonao ny fanomezana iray amin'ireto fitaovana ireto dia mihazakazaha mankany amin'ny fivarotana akaiky anao indrindra hividianana sy hivarotana. Ho hitanao ny fomba ahatsapanao fa tena ilaina izy ireo.
Mamaly an'i raccoon
Ny takelaka dia tsy inona fa ny fanoloana manaraka ny fanaraha-maso lavitra izay fantatsika rehetra ... ireo vilany feno bokotra izay mamadika ny fahitalavitra, ny radio, ny mpanao kafe ary mazava ho azy ... ireo izay manana ny bokotra koa esory ny fidiovana rehefa ampiasainao ... Ny fifehezana lavitra manaraka amin'ny automation ao an-trano dia takelaka ... mijery fotsiny ao anaty menio ianao raha te hanana ilay asa tadiavinao ary dia izay ... ny fatana dia manomana anao hisakafo maraina tsy misy resaka intsony. ..
kennedyperez dia hoy izy:
hirehareha amin'ny ubuntu 13.04 ary mijery sarimihetsika amin'ny amaca ahy
Mamaly an'i kennedyperez
Oskar raharaha dia hoy izy:
Ny takelaka Huawei Ideos S7 ahy dia fitaovana iray tena tsara ho ahy. Ny fampiasana fandaharam-potoana, milina fanoratana tsindraindray ao amin'ny trano fisakafoanana iray, hanehoana famelabelarana, fitahirizam-boky mahazatra ary ho an'ny fakan-kevitra haingana momba ny angona amin'ny Internet ho an'ny fivoriana, ary koa singa iray mampihetsi-po amin'ny fihainoana mozika na hijerena horonan-tsary.
Fa ny OjO, takelaka misy Wi-Fi ihany dia tsy dia ampiasaina loatra, satria tsy misy fifandraisana misy foana ka ny antsasaky ny fiasan'izy ireo ihany no ampiasain'izy ireo; raha te hampiasa takelaka 100% ianao dia takiana 3G na 4G. Mampalahelo fa any Mexico ny ampihimamba "Carso-Apple" dia nahatonga ny IPAD hibahan-toerana amin'ny tsena, ary satria lafo dia lafo dia amidiny amin'ny WIFI ihany izany ary ny takelaka hafa avy amin'ny marika hafa dia mivarotra azy ireo tahaka izao, raha mila iray amin'ny 3G ianao dia mila anontanio ny mpanafatra.
Hitako fa mampihomehy sy mahatsikaiky tokoa ny hoe any am-pivoriana dia mizara ny Internet amin'ireo heverina fa iPad an'ny mpiara-miasa amiko ny hevitra kely Sinoa S7 misy 3G sy Android misy ahy.
Ny ampahany mahatsikaiky iray hafa dia rehefa mahita ahy miresaka amin'ny telefaona 20 cm ...
Valiny tamin'i Oskar Chore
Takelaka an-tserasera dia hoy izy:
Tablet iray ampiasaina hivezivezena amin'ny tranonkala, ary amin'ny alàlan'ity fitaovana finday ity dia afaka mividy amin'ny fivarotana an-tserasera ianao ary tsy dia sarotra loatra izany, ny fitsaboana ihany no omena.
Mamaly takelaka amin'ny Internet
michu dia hoy izy:
ampio aho fa asa !!!
Mamaly an'i michu
maruendi dia hoy izy:
raha ny hevitro dia tsy misy ilana azy ireo satria ho an'ny mpampita hafatra sy ny vonjy taitra isan-karazany dia efa misy smarfones avo lenta. ary hiasa amin'ny solosaina findainy entiko midina avy any amin'ny birao mankany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny hijerena fahitalavitra raha manoratra zavatra iray aho. Raha ny fahitako azy dia ho faty tsy ho ela izy ireo toy ny dinôzôro. Etsy andanin'izany, tsy misy zavatra hafa hafa noho ny mahita ilay vatolampy maka sary amin'ireo monstrosities ireo.
Mamaly an'i maruendi
Any Mexico aho dia manana bizina momba ny rafitra fivarotana rafitra ary mampiasa takelaka aho mba hahafahan'ny mpanjifako manatsara ny fomba fiasan'izy ireo, ohatra, amin'ny takelaka misy mpanjifa ao amin'ny trano fisakafoanana iray afaka mandeha haka ny filaminana, ao amin'ny fivarotana akanjo misy mpanjifa. ny takelaka iray dia afaka maka lisitra haingana amin'ny faran'ny volana ary misambotra ny fahasamihafana, sns.
Fifaliana fa ny fitaovana 'mora / sinoa' ​​dia afaka manampy amin'ny fanaraha-maso tsaratsara kokoa. Mihobia!